Airbus: 39,000 diyaaradood oo cusub, 550,000 duuliye cusub ayaa loo baahan yahay 2040
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Airbus: 39,000 diyaaradood oo cusub, 550,000 duuliye cusub ayaa loo baahan yahay 2040
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Hawlgabka dayuuradaha da'da ah si loo dardargeliyo, si tartiib tartiib ah u dalbadaan beddelka, taageeraya ujeedooyinka kaarboonaynta warshadaha.
Baahida gaadiidka hawadu waxay sii wadi doontaa inay koraan, oo ay wado GDP, kor u kaca fasalka dhexe iyo rabitaanka sahaminta iyo isku xirka.
Horumarka joogtada ah ee hufnaanta maraakiibta, shidaalka waara, hawlgallada iyo teknoolajiyada kicinta ayaa awood u siin doona qaybta 2050 ujeeddada saafiga ah-eber.
Baahida loo qabo in ka badan 550,000 duuliye cusub iyo in ka badan 710,000 farsamoyaqaanno xirfad sare leh 20ka sano ee soo socota.
20-ka sano ee soo socda. Airbus waxay saadaalisay baahida loo qabo gaadiidka hawada inay si tartiib tartiib ah uga guurto kobaca maraakiibta una guurto hawlgabka degdega ah ee dayuuradaha da'da ah, ee aan shidaalka waxtarka lahayn, taasoo keentay baahida loo qabo ilaa 39,000 rakaab cusub iyo kuwa xamuulka qaada ah, 15,250 kuwaas ka mid ah beddelka. Natiijo ahaan, marka la gaaro 2040, inta badan diyaaradaha ganacsiga ee shaqeynaya waxay noqon doonaan jiilkii ugu dambeeyay, ilaa 13% maanta, taasoo si weyn u wanaajineysa tayada CO2 ee maraakiibta ganacsiga ee adduunka. Faa'iidooyinka dhaqaale ee duulistu waxay dhaafsiisan yihiin qaybta, oo wax ku biirinaysa 4% GDP sanadlaha ah waxayna joogtaa ilaa 90 milyan oo shaqo adduunka oo dhan ah.
Iyadoo ay lumisay ku dhawaad ​​​​laba sano oo korriin ah muddada COVID, taraafikada rakaabku waxay muujisay adkeysigeeda waxaana lagu wadaa inay dib ugu xirto kobaca sanadlaha ah ee 3.9% sanadkii, taasoo ay horseedo ballaarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga adduunka oo ay ku jiraan dalxiiska. Dabaqa dhexe, oo ah kuwa ugu fudud inay duulaan, ayaa tiradooda ku kori doona laba bilyan oo qof ilaa 63% dadweynaha adduunka. Kobaca taraafikada ugu dhaqsaha badan wuxuu ahaan doonaa Aasiya iyadoo Shiinaha gudaha uu noqon doono suuqa ugu weyn.
Baahida diyaaradaha cusub waxaa ku jiri doona ilaa 29,700 diyaaradood oo yar yar sida qoysaska A220 iyo A320, iyo sidoo kale ilaa 5,300 oo ah nooca diyaaradaha dhexdhexaadka ah sida A321XLR iyo A330neo. Qeybta weyn, oo ay dabooshay A350, baahida loo qabo ilaa 4,000 oo keenis ayaa la filayaa 2040ka.
Baahida xamuulka, oo ay xoojisay ganacsiga e-commerce, waxaa hogaaminaya kobaca la filayo ee xamuulka tooska ah ee 4.7% sanadkii iyo xamuulka guud (oo ka dhigan qiyaastii 75% suuqa) kobaca 2.7%. Guud ahaan, 20ka sano ee soo socda waxaa loo baahan doonaa 2,440 xamuul ah, kuwaas oo 880 ka mid ah ay noqon doonaan kuwo cusub.
Iyadoo la raacayo kobaca, hawl-gallada diyaaradeed ee waxtarka leh ayaa si caalami ah u kordhiya baahida adeegyada duulista ganacsiga - oo ay ku jiraan dayactirka, tababarka, cusboonaysiinta, hawlaha duulimaadka, burburinta iyo dib u warshadaynta. Kobacani wuxuu ku socdaa wadadii Airbus' Heerarka saadaasha faafitaanka kahor waxay gaarayaan qiimo isugeyn ku dhawaad ​​$4.8Tn 20-ka sano ee soo socda. Iyadoo lagu sii socdo hoos u dhaca la xiriira COVID ee 20% muddada 2020-2025, suuqa adeegyada ayaa dib u soo laabanaya, taasoo dhalinaysa baahi loo qabo ilaa 550,000+ duuliyeyaal cusub iyo 710,000+ farsamoyaqaanno xirfad sare leh 20ka sano ee soo socda. Iyadoo dayactirku uu ahaan doono qaybta adeegyada hogaaminaysa, duulimaadka, hawlaha dhulka iyo adeegyada waara ayaa sidoo kale la filayaa inay si weyn u koraan.
"Sida dhaqaalaha iyo gaadiidka hawadu u bislaadeen, waxaan aragnaa baahida sii kordheysa ee beddelka ah halkii koritaanka. Beddelka oo ah darawalka maanta ugu muhiimsan ee kaarboonaynta. Dunidu waxa ay rajaynaysaa duullimaadyo waara, tanina waxa ay suurtogelin doontaa muddada gaaban iyada oo la keenayo inta badan diyaaradaha casriga ah,” ayuu yidhi Christian Scherer, madaxa ganacsiga iyo madaxa Airbus Caalami. "Ku-xoojinta diyaaradahan cusub, waxtarka leh ee leh Shidaalka Duulimaadka Sustainable (SAF) waa kabaalka weyn ee xiga. Waxaan ku faaneynaa in dhammaan diyaaradaheena - A220, A320neo Family, A330neo iyo A350 - ay horeyba u haystaan ​​​​shahaadada inay ku duulaan 50% SAF, oo lagu wado inay kor u kacaan 100% 2030 - ka hor inta aan ZEROe ka dhigin xaqiiqada xigta ee 2035 ka dib.”
Warshadaha duulista ee caalamiga ah ayaa horeba u gaadhay guulo wax ku ool ah oo aad u weyn, sida lagu muujiyay 53% hoos u dhaca hawada CO2 ee duulimaadyada caalamiga ah tan iyo 1990. Badeecada Airbus waxay taageertaa ugu yaraan 20% waxtarka CO2 ee diyaaradihii hore. Iyadoo la eegayo hal-abuuro dheeraad ah oo socda, horumarinta alaabta, horumarinta shaqada iyo sidoo kale fursadaha ku salaysan suuqa, Airbus waxay taageertaa yoolka waaxda gaadiidka hawada si loo gaaro qiiqa kaarboonka saafiga ah-eber ah 2050ka.